बिवाहपछी भुलेर पनि नगर्नुस् यस्ता काम, नत्र सम्बन्ध टुट्न सक्छ
ramkrishna March 31, 2021
बिहे खर्च: बिहेमा तपाईंको धेरै पैसा खर्च भएको हुन सक्छ । ऋणको बोझ बढेको पनि हुन सक्छ । तर, जीवनसाथी भित्र्याउन नपाउँदै बिहेको खर्चको कुरा उठाउनुभयो भने ठान्नुस्, तपाईं गलत गर्दै हुनुहुन्छ । हो, कुनै न कुनै दिन सुनाउनैपर्छ, तर विनातनाव रमाइलो गर्न चाहना राख्ने सुरुवाती दिनमा यो कुरा गर्नुभयो भने जीवनसाथीसामु तपाईं सानो चित्तको ठहरिनुहुने ।
भूपू मायालु: जीवनसाथीलाई कहिल्यै पूर्वमायालुसँग दाँजेर हेर्ने नगर्नुस् । दुईजनालाई दाँज्ने काम गर्नुभयो भने यसले तपाईंको सुन्दर जीवनमा भलो गर्दैन । पुरानो सम्बन्ध पूरै भुलेर नयाँ अध्यायलाई स्विकार्नैपर्छ, नत्र सम्बन्ध टुट्न सक्छ ।
मिल्ने साथी: तपाईं सही नै हुनुहुन्छ, तर जीवनसाथीले तत्काल बुझ्न नसक्दा तपाईंको सानो कुरा पनि सम्बन्धमा गलपासो बनिदिन सक्छ । त्यसैले विपरीत लिंगी कोही मिल्ने साथी छ भने पनि बिहेको सुरुवाती दिनमा केही टाढै बस्नु उचित हुन्छ । किनभने, दुई–चार दिनको यात्रामै जीवनसाथीले तपाईंको स्वभावलाई पूरै पहिचान गर्न
सम्भव हुँदैन ।
पारिवारिक विवाद: कतिपयले घरपरिवारको इच्छाविपरीत पनि बिहे गरेका हुन सक्छन् । तर, बाआमाले नमान्दा–नमान्दै पनि मैले तिमीसँग बिहे गरेको हो भनेर जीवनसाथीलाई तात्तातै नभन्नुस् । यसो भन्दा जीवनसाथीको ध्यान तपाईंको त्यागभन्दा बढी परिवारविपरीत केन्द्रित हुन सक्छ । यो नै घरभित्र कलहको बिउ बनिदिन सक्छ ।
जागिर : जागिरमा जोड आत्मनिर्भर हुनु जायज कुरा हो । तर, जीवनसाथी बेरोजगार छ भने बारम्बार जागिरकै प्रसंग निकालेर आजित नबनाउनुस् । बरु, जागिर खोज्न जीवनसाथीलाई मद्दत गर्नुस् । सुरुमै हतोत्साहित पार्ने काम नगर्नुस् ।
Previous Previous post: यी ५ वास्तु दोष छ भने, घरमा झगडा हुने गर्दछ – तपाईको पनि छ कि ?
Next Next post: सपनामा मरेको मान्छे देख्नु के अर्थ हुन्छ ? जान्नुहोस्